Ifekthri Yekhithi Yokucwenga Amazinyo - Abakhi Bekhithi Yokucwenga Amazinyo e-China, Abahlinzeki
I-Wholesale Private Label UV Teeth Whitening Kit ikhithi ye-uv yamazinyo emhlophe epakishwe ngendlela oyifisayo, ilebula yomuntu siqu eyenziwe ngokwezifiso, ijeli enziwe mhlophe yamazinyo enokugxila okuhlukene ngokwezidingo ezahlukene.
Ikhithi ye-LED emhlophe yamazinyo
Ikhithi yokukhanya yokwenza amazinyo abe mhlophe enobuchwepheshe bejeli obumhlophe obusebenza ngamazinyo, iyashesha, iyasebenza, futhi ifaneleka, 5 ithunzi phezulu. Ngokukhanya kwe-accelerator yekhwalithi ephezulu, ungakwazi ukwenza amazinyo akho abe mhlophe ekhaya. Ikhithi yokukhanya eyenza amazinyo abe mhlophe isekela ilebula yangasese futhi nokukhanya kwamazinyo ekhaya kungenziwa ngendlela oyifisayo.
Amazinyo Whitening Kit-white
The wholesale amazinyo mhlophe kits, ungakwazi ngezifiso ukugxila kanye nokwakheka, uma unombono ongcono, sicela usitshele ngqo. Singumkhiqizi ocwenga amazinyo ohlinzeka ngamazinyo ekhithi yokucwenga kanye nemikhiqizo ehlukahlukene yokwenza mhlophe ngesevisi yelebula yangasese.
Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe, Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe, Amazinyo Amhlophe Ijeli kanye namathileyi, I-Ismile Home Teeth Whitening Kit Gel Led Light, Ukugcwalisa Ijeli Elimhlophe Amazinyo, Ikhithi ye-Led yokucwenga amazinyo,